किडनी फेल हुन बाट बच्न के गर्ने ? पढेर सेयर गर्नुहोला - Ektm news
Home›स्वास्थ्य›किडनी फेल हुन बाट बच्न के गर्ने ? पढेर सेयर गर्नुहोला
किडनी मानव शरिरकाे एउटा महत्वपूर्ण अ‌ंग हाे । तर हाम्राे अाफ्नै कारण र हाम्राे खानपाकाे अनियमितताका कारण किड्नी फेल हुने घटनाहरु हिजाअाज सामान्य जस्तै बनेकाे छ ।किड्नी फेल हुनु भनेकाे किड्नी खुम्चनु हाे । किड्नीमा रहेकाे नेफ्राेन्स भन्ने अंगले शरिरलाइ नचाहिने अनावश्यक फाेहाेर पिसाबका रुपमा बाहिर पठाउने गर्दछ । तर किड्नी खुम्चिएकाे अवस्थामा नेफ्राेन्स थिचिनाले यसले राम्ररी फाेहाेर छान्न सक्दैन ।यसाे हुँदा हाम्राे शरिरमा रहेकाे विषाक्त पदार्थ Creatinine र Urea का रुपमा रगतका माध्यमबाट शरिरमा फैलन्छ । यसैलाइ अाधुनिक अाैषधि विज्ञानले किड्नी फेल भएकाे भन्दछ । र यस अवस्थामा किड्नी फेर्ने बाहेक अर्काे बिकल्प याे विज्ञानसँग छैन ।काली गेडी (परि गाेलभेडा ) जंगली बिही वा काकमाची लगायत ठाउँ अनुसार नेपालीमा सम्बाेधन हुने याे झार नेपालमा जताततै पाइन्छ ।
अंग्रेजीमा Common Night Shade र वैज्ञानिक नाम Solanum americanum mill भएकाे याे झारका ससाना दाना पाके पछि काला हुन्छन् र केटाकटीले यदाकदा खाने पनि गर्दछन् ।याे वनस्पतीकाे पुरै बिरुवा उखलेर राम्ररी सफा गरि सफा ठाउँमा पिँध्ने र २० मि लि का दरले दिनकाे दुइ पटक तीन मिहना सम्म नियमित सेवन गर्नुहाेस । र यस पछि Sonography गराएर हेर्नुहाेस ।
मन थामेर हेर्नुहोस बिमान दुर्घटना पछिको दर्दनाक ...
लसुन र प्याजको फेसप्याकः घरैमा बनाउनुस् चम्किलो ...
८ स्वस्थ्य बानी, जसले शरीरमा रोग लाग्न दिंदैन (पुरा पद्नुहोला
हर्ट-अट्याक हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि शरीरले यी संकेत दिन थाल्छन – यिनलाई बेवास्ता नगरौँ, मृत्युको मुखबाट बचौं
तीते करेलाको नियमित सेवनले एक हप्तामै निको हुन्छ यस्ता भयानक रोगहरु… जानी राख्नुहोस जीवनमा काम लाग्छ !
अनार खाँदा यस्ता छन् फाईदै फाईदा !
डा. श्रेष्ठले दिइन् मृगौला जोगाउने टिप्स : आफू पनि पढौं र शेयर गरेर जानकारी दिअौं
नयाँ वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रले दिए घोचक शुभकामना, के भनें ? पूरा पढौं, शेयर गरौँ
बिहान खाली पेटमा चिया पिउँनुहुन्छ ? होस गर्नुस्
अभिन्न अंग किड्नी जोगाउने १० तरिका, जसले किड्नी सुरक्षित राख्छ ! पढेर सबैलाई जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोस